अब मासिक ५ सयमै इन्टरनेट ! तर कसरी ?
मधुमल्ला । इन्टरनेट प्रदायक संस्था आइजोन प्रा.लि.ले आगामी दशैं तिहारको अवसरमा सहुलियत शुल्कमा इन्टरनेट सेवा बितरण गर्ने भएको छ ।
प्रा.लि.ले शनिबार उर्लाबारीको होटल सम्राटमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सो जानकारी दिएको हो । सूचना प्रविधिमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएकोले सबैको पहूँचमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यले रहेको प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक नविन श्रेष्ठले बताए । इन्टरनेट सेवाको पहुँच सहज, विश्वासनीय र मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले सहुलियत शुल्कमा इन्टरनेट बितरण गर्न लागिएको प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले बताए । प्रा.लि.ले मासिक पाँच सय रुपैयाँमा इन्टरनेट सेवा बितरण गर्न लागेको उनले बताए ।
२०७२ सालमा स्थापित सो प्रालिको उर्लाबारी–५ मा केन्द्रीय कार्यालय रहेको छ भने इटहरीमा क्षेत्रीय कार्यालय, इनरुवा, विराटचोक, पथरी र दमकमा शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् । निकट भविष्यमै मधुमल्ला, धरान र विराटनगरमा शाखा बिस्तार गरिने प्रालिका निर्देशक सम्शेर आलमले जानकारी दिए । १० एमबीपीएस इन्टरनेट क्षमता रहेको सो प्रा.लि.ले एमपिएलस प्रणाली समेत जडान गरेको छ । यसले इन्टरनेट सेवाको गति नियमित र सुरक्षित गर्ने जनाइएको छ ।
सञ्चार क्लब नेपालमा आबद्ध पत्रकारहरुलाई ५० प्रतिशत छुटमा इन्टरनेट जडान गरिने आइजोन प्रा.लि.का प्रबन्धक निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । करिब ८ करोड रूपैयाँको लगानीमा सञ्चालित कम्पनीले ५ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइवरमार्फत उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट प्रदान गरिरहेको उनले बताए । आइजोन प्रा.लि.ले ६० भन्दा बढीलाई रोजगारीसमेत दिएको बताइएको छ ।